Wasiirka Qorshaynta Oo Soo Kormeeray Mashruuca Horu Marinta Beeraha Ee Deegaanka Aburiin Oo Laga Maal Gelinayo Sanduuqa SDF+Sawiro
(Hadhwanaagnews) Thursday, April 20, 2017 18:05:10
Hargeysa(HWN):-Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka JSL Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo-tire) ayaa soo kormeeray mashruuca horumarinta beeraha ee ay Wasaaradda Beeraha Somaliland ka fulinayso deegaanka Aburiin ee laga maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Mashruucan oo ka kooban laba qaybood oo iskugu jira dhaqaalaynta ciida iyo biyaha. ayaa haatan meel fiican maray iyadoo wajigii hore uu dhamaaday sidii loogu talagay wajigii labaadna uu hada bilow fiican marayo.
Warbixin kooban ay hawlwadeenada mashruucu ka siiyey Wasiirka ayaa waxay ku sheegeen in tirada guud ee
balayiyada uu sameynayaa ay tahay 28 balli tirada biyaha ay qabanayaana ay tahay 300,000 miter cubic xiligiiba waxaanay xoolaha haynayaan ilaa 8bilood. waxa kale oo mashruuca laga sameynayaa 17 barkadoo oo midkiiba ay qaadayso 210 miter cubic, waxa kale oo uu mashruucu qabtay 8960 oo naxaro ah oo midkiiba uu qaadayo miter cubic.
sida warbixintu ay sheegtay waxa uu mashruucu xili roobaadkiiba qaban doona biyo xadigoodu dhanyahay 1,500,000 miter cubic, waxa kale oo uu mashruucu buuraha ku beeray 12,000 geed,sidoo kale mashruuca ayaa shaqo abuur sameeyey.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka JSL Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo-tire) ayaa isaguna dhankiisa aad uga mahadnaqay hawlwadeenada mashruuca oo uu ku amaanay sida wadaniyadda le ee ay uga shaqeeyeen mashruuca, isagoo ka xukuumadd ahaana sheegay inay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad oo ay Wasaaradda Qorshaynta diyaarinayso ay doorkan muhiimadda kowaad siin doonaan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka oo ay ugu horeyayn doonaan, badbaadinta deegaanka, dhaqaalaynta ciida iyo biyaha.
gabagabadii Wasiirku waxa uu u mahaddnaqay Xafiiska Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.